John Terry Iyo Mason Mount Oo Fariimo U Diray Frank Lampard Kadib Markii Laga Ceyriyay Chelsea
HomeHoryaalka IngiriiskaJohn Terry iyo Mason Mount oo fariimo u diray Frank Lampard kadib markii laga ceyriyay Chelsea
John Terry iyo Mason Mount ayaa labaduba fariimo taageero ah u diray Frank Lampard ka dib markii laga ceyriyay Chelsea .
Lampard ayaa laga qaaday shaqadiisii ​​tababaranimo ee Chelsea Isniintii ka dib markii Roman Abramovic uu faaska ku dhuftay iyadoo kooxda ay sii xumaaneyso siina gashay kaalinta 9aad ee Premier League.
Thomas Tuchel ayaa lagu wadaa inuu ka bedelo garoonka Stamford Bridge, Lampard ayaana ku tagay ‘niyad jab’ ma uusan helin fursad uu kooxdiisa ku aado ‘heerka ku xiga’. Waxaa jiray fariimo fara badan oo diirran oo loo diray tababaraha la ceyriyay ee Chelsea, oo ay ku jiraan Reece James iyo Tammy Abraham, halka Jose Mourinho uu qirtay inuu ‘murugaysan yahay’ inuu arko xiddigiisii ​​hore ee shaqada laga ceyriyay.
Terry, Lampard oo ay waqti dheer soo wada shaqeeyeen Chelsea hadana caawiye maamule ka ah Aston Villa, ayaa ku amaanay Lampard iyo caawiyahiisa ka tagaya Jody Morris inay yihiin ‘halyeeyo waligood’ isagoo ku soo qoray barta Instagram.
Mount, oo noqday shaqsi fure u ahaa intii Lampard uu xukumayay Chelsea isagoo horey amaah kula qaatay tababaraha Blues Derby County, ayaa sidoo kale amaanay saameynta Morris iyo Lampard ee mustaqbalkiisa ciyaareed.